Zvisingagumi Mawiricheya: Ndeupi mhando yemhando yezvinhu
Zvisingagumi Mawiricheya: Ndeipi mhando yepamusoro yezvinhu zvekutenga
Kuziva iyo wheelchair yakakwana enyu mamiriro ari basa rakaoma, asi kusarudza a wheelchair yakasimba chimwewo chinhu chekuchengeta mupfungwa kana uchitenga wiricheya. Iko kune imwe gakava pamusiyano uripo pakati pealuminium nesimbi wiricheya mafuremu.
Vanhu vazhinji havafungi nezvezvinhu zve wiricheya kana uchitenga chigaro, ndizvo zvakakosha kuti uenzanise neyakakodzera furemu zvinhu neyako mararamiro. Mutengo, mukurumari, uye simba vs. huremu zvinhu zvinozivikanwa zvinopatsanura imwe wiricheya kubva kunotevera. Kumusoro-kumagumo Chichemo chemaoko tendera kugadzirwa kubva pane zvakadhura zvinhu, senge ndege yegiredhi aluminium, titanium uye kabhoni fiber.
Carbon Fibhi uye Titanium Yakasimba Mawiricheya
izvi Mawiricheya inowanzo kuve inodhura uye isingawanzoshandiswa mukushandisa kwemazuva ese; izvi imhaka yekuti magumo epamusoro mavhiripu inowanzo shandisirwa zvidikanwi zvakadai se basketball wheelchair, uye wiricheya Mujaho. Pasina mubvunzo kuti idzi dzakasimba kwazvo mavhiripu, asi ivo zvakare vanowanzo kuve yeimwe niche, kwete yeavhareji ezuva nezuva mushandisi.
Aluminium Yakasimba Wiricheya
Aluminium yaizove imwe mhando yezvinhu zvinoshandiswa mu wiricheya mafuremu. Zvichienderana neiyo unhu uye chiyero chealuminium, idzi Wiricheya yakasimba inogona kushandiswa mukushandisa kwemazuva ese uye kazhinji inowanzo kuve iyo mhando yezvinhu zvinosarudzwa nevazhinji wiricheya vashandisi nekuti vanowanzo kuve lightweight.
Semuenzaniso, Ndege yegiredhi aluminium inoshandiswa mu wiricheya mafuremu, mhedzisiro yacho chiwanikwa chesimbi chinopa hukuru mashandiro, uye chinopesana nehurosi.
T6 ndege yegiredhi aluminium inowanzo shandiswa pamabhasikoro mafuremu, asi zvakare inoshandiswa nevazhinji asingaremi mawiricheya kuti Karman inopa. Chinyorwa ichi chinokwanisa kuvapo kwenguva yakareba pasina kuora kwakakosha, kwedu wiricheya mafuremu ane T6 nendege aluminium akagadzirirwa kuti agare, izvo zvinodikanwa mazuva ese wiricheya zvinodiwa uye akasiyana mabasa ayo munhu anogona kusangana nawo mukati mezuva ravo.
Simbi Yakasimba Wiricheya
Simbi ndiyo imwe mhando yezvinhu zvinoshandiswa kusimba mavhiripu, Rimwe rematambudziko nesimbi mawiricheya ari kuti mafuremu ewiricheya yakavakwa nesimbi, inowanzo kuve inorema kupfuura aluminium wiricheya mafuremu, zvinoreva kuti anonetsa kuchengeta nekupeta. Izvi zvinoshandiswa zvakanyanya pamwero mavhiripu, zvichireva kuti ivo vanowanzo kuve padivi risingadhuri remitengo, pavanenge vachibaira iyo simba kuyera uremu.
Mapuranga esimbi anowanzo guma nekusimba wiricheya, zvakare iyo mutengo inogona kunge yakaderera, asi urikupa zvibayiro zvakawanda zvinobatsira kuti aruminiyamu lightweight wiricheya anogona kuva.
Kana vanhu votaura simbi mavhiripu, anowanzonzi “ekare chikoro Mawiricheya”Uye“ yechinyakare mavhiripu", Izvi zvinodaro nekuti zvaive zvakajairika kumashure mumazuva kuve nesimbi simbi wiricheya, asi mazuva ano pane zvirinani zvirinani zviripo pamusika, yakanyanya kuve aluminium Mawiricheya.
Zvimwe Zviwanikwa zvekutarisa mazviri
Carbon Fiber Mawiricheya
Spinlife.com - Aluminium Mawiricheya
Spinlife.com - Simbi Wiricheya
US Chiremba - Manual Mawiricheya
Ndokumbira upe isu nerumwe ruzivo: